सावधान ! बुढ्यौलीमा बढ्दो उमेरसँगै किन बढ्छ ? यस्ता खतरनाक रोगहरुको जोखीम:: Naya Nepal
सावधान ! बुढ्यौलीमा बढ्दो उमेरसँगै किन बढ्छ ? यस्ता खतरनाक रोगहरुको जोखीम
काठमाडौँ । तपाईले देख्नुभएकै होला कि बढ्दो उमेरका साथ हामी पनि रोगहरूको जोखिमको सामना गर्दछौं। बूढो उमेरमा शरीर र प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हुनुको कारण शरीर धेरै रोगहरूको घर बन्न पुग्छ। वृद्धहरू घरको मेरुदण्ड हुन्। तर यो एक उमेर हो जब वृद्धहरूलाई बढी हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ। बिरामीको कारण, तिनीहरूको शरीर यति कमजोर हुन्छ कि कहिलेकाँही दुखाइ र असुविधा प्रायः दैनिक रूपमा हुन्छ। कमजोर प्रतिरक्षाको कारण, शरीरमा रहेका रोगहरू ब्याक्टेरियाहरूसँग लड्न असमर्थ हुन्छ ।
बढ्दो उमेरको साथमा किन बिमारीको खतरा बढ्दै जान्छ ?
हृदय रोग को समस्या नेपालीहरुमा धेरै बढी छ। बुढेसकालमा हृदय रोगको सम्भावना बढ्छ। यद्यपि यस सम्बन्धमा, रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका केन्द्रहरूले अमेरिकामा हृदय रोगहरू सबैभन्दा सामान्य हुने विश्वास गर्दछन्।५० बर्ष भन्दा माथिका मानिसमा यो रोगको जोखिम बढ्नेछ।
बढ्दो उमेरमा क्यान्सर जस्तो ज्यान लिने रोगको जोखीम बढ्दै जान्छ ।
क्यान्सरको मामिलामा अमेरिका पहिलो स्थानमा छ।अमेरिकामा हृदयघातबाट धेरै मानिसहरुको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबैभन्दा बढी मृत्यु हृदयघातबाट हुने गर्दछ। क्यान्सर त्यहाँको दोस्रो सबैभन्दा खतरनाक रोग हो।
स्ट्रोक न्यूरोलॉजिकल रोगहरूमा सबैभन्दा सामान्य छ। अमेरिकामा, अधिकांश बिरामीहरू यस रोगबाट मुटुको आक्रमण र क्यान्सर पछि मर्दछन्। यो रोगले वृद्धलाई सबैभन्दा बढी असर गर्दछ।
वृद्धावस्थामा मस्तिष्क सम्बन्धित रोगहरूको खतरा हुन्छ। अमेरिकामा क्यान्सर र मुटुरोग पछिको मृत्युको कारण हृदयघात हो। यो सबैभन्दा बढी संख्या रहेको छ। यसले गर्दा वृद्धहरूको मृत्यु सबैभन्दा बढी हुन्छ ।